Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Hindiya hadda waxay u furan tahay dalxiisayaasha shisheeye ee si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Waa markii ugu horreysay oo Hindiya ay u oggolaato dalxiisayaasha ajnabiga ah inay soo galaan dalka tan iyo bishii Maarso 2020 markii ay ku soo rogtay xiritaankeedii ugu horreeyay ee coronavirus -ka waddanka oo dhan.
Soo -booqdayaasha ajnabiga ah oo si buuxda loo tallaalay oo ku safrayay duulimaadyada kirada ah ayaa oggolaaday in Hindiya laga bilaabo maanta.
Socotada caalamiga ah ee duulimaadyada caadiga ah waxay awoodi doonaan inay soo galaan Hindiya laga bilaabo 15ka Nofembar.
Ma cadda in dalxiisayaasha imanaya ay tahay inay karantiil ku sameeyaan laakiin waa inay si buuxda u tallaalaan oo ay tijaabiyaan diidmada fayraska 72 saacadood gudahood duulimaadkooda.
Soo booqdayaasha ajnabiga ah ayaa ugu dambeyn loo oggol yahay inay soo galaan Hindiya mar labaad, markii ugu horreysay tan iyo Maarso 2020, markii waddanku soo rogay xiritaankiisii ​​ugu horreeyay ee waddanka oo dhan COVID-19.
Nasashada ugu dambaysa ee xannibaadaha COVID-19, Mas’uuliyiinta dowladda Hindiya ayaa Jimcihii shaaciyey in dalku dib u furmay si loo tallaalayo booqdayaasha caalamiga ah ee ku safraya duullimaadyada kirada ah.
Socotada shisheeye ee duulimaadyada caadiga ah ayaa awoodi doona inay soo galaan Hindiya laga bilaabo 15 -ka Nofeembar, ayay saraakiishu intaas ku dareen.
Wali ma cadda in dalxiisayaasha imanaya ay tahay inay karantiil ku sameeyaan Hindiya, laakiin waa in si buuxda loo tallaalo oo laga baadho diidmada fayraska COVID-19 72 saacadood gudahood duulimaadkooda.
Go’aanka dib loogu furayo dalka, oo horaantii bishaan ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ee Hindiya, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo caabuqyada maalinlaha ah ee Hindiya ay hoos uga dhaceen 20,000 oo ay ugu sarreeyeen 400,000 bishii May dad badanna la tallaalay.
Hindiya ayaa maamulay in ka badan 970 milyan oo tallaal. Ku dhawaad ​​boqolkiiba 70 dadka waaweyn ee u qalma ayaa qaatay ugu yaraan hal qiyaas.
Fududeynta xayiraadaha saaran dalxiisayaasha ajnabiga ah ee dalka booqanaya, si kastaba ha ahaatee, waxay ku beegan tahay xilliga dalxiiska gudaha Hindiya iyo xilliga ciidda. Durba, waxay kicisay walaac saraakiisha caafimaadka oo ka digay is -qancin.
Horaantii bishaan, Golaha Hindida ee Cilmibaarista Caafimaadka, oo ah hay'adda caafimaadka ee Hindiya, ayaa ka digtay in "dalxiiska aargoosiga" ay horseedi karto in uu ku sii bato caabuqyada COVID-19 haddii dalxiisayaashu aysan si adag u hoggaansamin xeerarka amniga.
Sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah, in ka yar saddex milyan oo dalxiisayaal ajnabi ah ayaa booqday Hindiya sannadka 2020, taas oo hoos u dhacday in ka badan 75 boqolkiiba marka la barbar dhigo 2019.